Myanmar (Burmese) Muslim Association’s Statement on Communal Riots | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Save Maryam
Even ‘Suu Kyi after Muslim-free Myanmar’ ? »
Myanmar (Burmese) Muslim Association’s Statement on Communal Riots
Statement on Communal Riots in Rakhine State, Myanmar
1. The news wrote in the Myanmar government’s newspapers on 5th June 2012, “Kalar Muslims”(Kalar is derogatory term for Muslim) deliberately assaulted cruelly on Rakhine women,” had started the instigation by cooking up the simple criminal case intoaracial and religious hatred, leading to communal riots.
2. Current President’s office director, major Htay Zaw recklessly wrote fomented postings in his Hmu Zaw face book, repeatedly to incite the people; such as “Fully armed Rohingyas from Bengladesh have illegally invaded Myanmar”, “Don’t talk about empathy, Human Rights issues” and “To protect the lives of Rakhine people and the motherland is urgently facing security threat from illegal invader Bengalis”; which were not true.
3. The accusations and counteraccusations of both sides for attacking each other and the news of blatant lopsided unjust treatment from the various relevant authorities came out subsequently.
4. Repetitive and widespread attacks on so-called Illegal Immigrants as well as on the Islam and the Myanmar Muslims who are legally recognized by successive Union of Myanmar constitutions were subsequently ensued though out the country.
5. Although some local media and face books intentionally mixed up the Anti-Rohingya campaign with Anti-Muslim hate-propaganda, many international human rights organizations, ASEAN, international community, various countries, OIC, Muslims from other countries and UN etc. openly voiced their concern upon the news of assault and killing of minority Muslim Rohingyas.
6. At the same time, we heard the very dangerous threats and call for Jihad (religious war) on Myanmar by the radical Muslims from few countries.
7. We are sad that the instigation of the radicals had caused the Rakhine Communal Riots resulting in loss of properties and lives of the people from both sides. Those conflicts side-lined the Myanmar peoples’ desires such as: Human Rights, Democracy, stopping the civil war with the Ethnic Minorities, amending the constitution, releasing of the remaining prisoners of conscience and to protect the rights of workers and farmers. We are distressed to see these important political changes and improvements marginalized by the hardliners with the lame excuse of the National Security issue.
Therefore, we hereby clearly declare the views and stands of the Burma Muslim Association.
(a) All Ethnic Nationality and Citizenry problems including Rohingya issue must be discussed and decided at the conference participated by the government, political parties, all the people and Ethnic Minorities, local and foreign experts according to the Internationally acceptable standards and the vital interest of national security is safeguarded. (Daw Aung San Suu Kyi had stated in the Parliament that there is no proper exclusive definition for the word Ethnic Nationality in our constitution.)
(b) All the legal citizens regardless of race and religion must be equally protected by the existing laws of the country.
(c) Take strict action on Illegal Immigrants and those authorities who allowed them to enter illegally.
(d) Need to severely punish with the deterrent sentences to the instigators and rioters who committed the crimes during the commotion, irrespective of which side of the political and racial divide they were on.
(e) Get adequate help and aids promptly from local and foreign donors to rehabilitate and for reconciliation of the both sides of the suffered and shattered society.
(f) As Foreign Governments and International organizations’ worries are based on rumors because of the lack of freedom of press, government should allow the foreign press frees access if the government believes that it has nothing to hide.
(g) Government should formacommission for peaceful coexistence of citizens from different religions and races.
(h) We hereby strongly denounce all the incitation of Muslim Radicals who are exploiting the present difficulties. As Myanmar Muslims are always faithful loyal citizens of our beloved Myanmar country throughout the history, we clearly pronounce that we are ready to sacrifice our lives to defend our motherland hand-to-hand together with our brethren Myanmar Nationalities from any foreign racial and religious related intervention.
Myanmar (Burmese) Muslim Association
Media Contact; Ko Kyaw Swar +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org; Daw Maulie +1 416 516 7383 Canada law4women@gmail.com; Ma Yasmin +1 408 250 6227(USA) yasnohana@sbcglobal.net
This entry was posted on July 29, 2012 at 3:23 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “Myanmar (Burmese) Muslim Association’s Statement on Communal Riots”
July 29, 2012 at 4:27 am | Reply
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အထိကရုဏ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ BMA မှ သဘောထားထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွါးနေခဲ့သော အထိကရုဏ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အစည်းအရုံး (BMA) ၏ သဘောထားကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံမှာ ….
၄။ တစ်ဖန် တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူများကို ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ..
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ အဆက်ဆက်က အသိအမှတ်ပြုထားသော အစ္စလာမ် ဘာသာနှင့် နိုင်ငံသား မြန်မာမွတ်စလင်များကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ရှိလာသည်။
၅။ ပြည်တွင်းမီဒီယာ အချို့နှင့် Facebooks များက ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးနှင့် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးများကို ထွေးရောယှက်တင် ဖေါ်ပြနေကြသော်လည်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ အိုအိုင်စီ(OIC)၊ မွတ်စလင်နိုင်ငံများက ပြည်သူများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ စသည်တို့က လူနည်းစု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာများ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှု ခံနေရသော သတင်းများအပေါ်တွင် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာကြသည်။
၇။ အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အထိကရုဏ်းများတွင် သေကြေ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသော နှစ်ဖက်သော ပြည်သူများအတွက် အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲရပါသည်။ ထိုအရေးအခင်းကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးလိုလားသော လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ကျန်ရှိသေးသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လယ်သမား အခွင့်အရေးစသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် တင်းမာသူများ အလိုကျ မှေးမှိန်အားပျော့ လာသည်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့် တွေ့မြင်နေရသည်။
(က) ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားပြသနာများကို (တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဟူသော ဝေါဟာရအား အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။) အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ နိုင်ငံတကာစံများနှင့်လည်း ညီစေသော ကွန်ဖရင့်ကြီးတစ်ခုဖြင့် အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များရယူရန်။
(င) အထိကရုဏ်းများကြောင့် ကျိုးကြေသွားရရှာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ထိရောက်အားကောင်းသော အကူအညီများကို အလျှင်အမြန်ရယူရန်။
(ဇ) လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မွတ်စလင်အစွန်းရောက်များ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုမှန်သမျှကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည်။ မြန်မာမွတ်စလင်များသည် သမိုင်းစဉ်လာအရ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာခံသော တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများသာဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး သွေးထိုးစွက်ဖက် မှုမှန်သမျှကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် လက်တွဲ၍ ပြည်ထောင်စု၏ အချုပ်အခြာကို သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
နိုင်ငံတကာသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း။ SOURCE: Haji U Mg Mg (my number5brother’ FB
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနေလိုသော နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသော မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် အနေနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၊အစိုးရအဖွဲ့များ၊ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ သို့ အောက်ပါအတိုင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ရှေးယခင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကထဲက လူမျိုးစုံ ဘာသာတရားမျိုးစုံနှင့် အတူ အေးအတူပူအမျှ ကောင်းတူဆိုးဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်နေခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ သဘောထားအမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူများ-အယူသီးသူများ-တယူသန်သူများ ထိပ်တိုက်တွေ့သောအခါ ပဋိပက္ခ အထိကရုန်းအသွင်ဆောင်သောပြသနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ မငြင်းနိုင်သော ကိစ္စများဖြစ်ပါသည်။
မကြာခဏ ဖြစ်ပွားခဲ့သောပြသနာများကို နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ရှိသူများက မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေ-မဖြေရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်း ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ပြေလည်အောင် တည်ငြိမ်မှုရှိအောင် ဖြေရှင်းခဲ့သည်သာဖြစ်ပေသည်။
ပြည်ပမှ ကျွန်ုပ်တ်ို့၏ပြသနာများအတွင်းဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုများရှိလာသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအတွက် ပိုမိုခက်ခဲသော အခြေအနေများကိုသာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော သာဓကများရှိခဲ့ပါသည်။
မည်သည့် အကြောင်းပြချက်နှင့်ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ တာလီဘန်များက ဗုဒ္မရုပ်ပွားတော်များကို ဖျက်စီးခဲ့သည့် အကျိုးဆက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆိုးယွားလှစွာသော ဘာသာရေးစော်ကားမှုအမည်းစက်အဖြစ် အပြစ်တင်ခံနေရဆဲဖြစ်နေပါသည်။ရုပ်ပွားတော်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူများ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်တော့ပါ။သို့သော် သူတို့၏ မှားယွင်းသော လက်တုန့်ပြန် ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ယနေ့တိုင်ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများ၏ လျှင်မြန် မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏ မှားယွင်းသောသတင်းတင်ပြမှုများ-စိတ်ဆန္ဒစောတင်ပြမှုများအပေါ် အခြေခံကာ ပြည်တွင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် နယ်စပ်ပြသနာကို ပြည်တွင်းနေထိုင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များထံသို့ပါ ကူးစက်ပြန့်ပွား လာစေရန်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုဆဲဆိုစော်ကားမှုများ၊ခြိမ်းခြောက်မှုများ များစွာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလား သော ဗုဒ္မဘာသာဝင် သံဃာတော်များ၊လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပူးပေါင်းကူညီမှုဖြင့် ပြသနာရပ်များပြန့်နှံ့မလာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ တားဆီးထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျန်ရှိနေသေးသော ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်မှာ နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်နေသော အစိုးရ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ဖြေရှင်းရာတွင် နှစ်ရှည်လများဖြစ်ခဲ့သည့်ပြသနာဖြစ်ခြင်း-နယ်စပ်မှတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုများရှိနေခြင်း-တဘက်နှင့်တဘက် မဖြစ်နိုင် သောတောင်းဆို အပြစ်တင်မှုများရှိနေခြင်း-များပြားလှစွာသော ပြသနာများ ဖြေရှင်းရန်ရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် လည်းကောင်း ၊နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေအရလည်းကောင်း ထိုက်သင့်သည့် အချိန်ယူဖြေရှင်းရမည့် ကိစ္စဖြစ်နေပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊အစိုးရများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် စစ်မှန်သော အကူအညီ ပေးအပ်လိုသည်ဆိုပါက-နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော အစို့ရအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သောရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း အကူအညီများ၊ငွေရေးကြေးရေးအကူအညီများ၊နည်းပညာအကူအညီများပေးရန်သာ အကြောင်းရှိပါသည်။
ယခုလုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာရှိမြန်မာသံရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခြင်း၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအားစော်ကားမော်ကားပြုမီးရှို့ပြခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး၏ဓာတ်ပုံအား မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခြင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားများအား တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများသည် မည်သည့် အကျိုးတရားကိုမှ ရရှိလာမည်မဟုတ်ဘဲ-ပြည်တွင်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် ပိုမို ခက်ခဲကျပ်တည်းသော အခြေအနေတရပ်သို့ တွန်းပို့ပေးသလိုသာဖြစ်မည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအပေါ် ကုလသမဂ္ဂတပ်များစေလွှတ်ရန် တိုက်တွန်းမည့်အစား အခြေအနေပိုမိုဆိုးယွားနေသော ဆီးရီးယားကိစ္စကို အာရုံစိုက်သင့်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာ ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့သည်လည်း အီရန်နိုင်ငံ၏နောက်မှ သံယောင်မလိုက်သင့်ပါ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေနှင့်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ်ရန်လိုသော သဘောထားများမထားသင့်ပါ။တာလီဘန်အဖွဲ့အနေနှင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ-မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားများ၊ သံတမန်များ၊အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို ခြိမ်းခြောက်မှုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏တာဝန်လည်းဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့မှလည်း အသက်ပေး ကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် သက်တမ်းနုနယ်လှသေးသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျနေသော နိုင်ငံတော် လျှင်လျှင်မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လည်းကောင်း အပြုသဘောနှင့် ဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားအပ်ပါသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏အဆုံးအမများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော-နိုင်ငံတကာမှလက်မခံနိုင်သော-ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား လူမျိုးမရွေး ဘာသာ မရွေး က လက်မခံနိုင်သော အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊သတင်းမှားထုတ်ပြန်ခြင်း၊သတင်းမှန်ကိုချဲ့ကားဝါဒဖြန့်ခြင်း၊နိုင်ငံတော်-နိုင်ငံတော်အလံနှင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများအားစော်ကားမော်ကားပြုလုပ်ခြင်းများကို ရပ်တန့်ပေးပါရန် လေးနက်တည်ကြည်စွာမေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံအခြေစိုက် တာလီဘန် ခြိမ်းခြောက်မှု မြန်မာ မွတ်စလင်များ လက်မခံ
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပဋိပက္ခများသည် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှု များကြောင့် ဖြစ်ပြီး ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံးသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေလိုကြကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မူရင်း ဧရာဝတီ